ㆍISBN : 9788928231317
ㆍPáginas : 464
Kiristaanonni hedduun butamuun qulqullootaa bara gidiraa dura ta'a jedhanii yaadu. Sababiinsaa kiristaanonni baroota torban Gidiraa Guddaa sana dura butamu jedhamanii dogoggoraan barsiifamaa waan turaniif dhibaa'ummaan guutamanii jireenya amantii isaanii geggeeffachaatti jiru.
Haa ta'u iyyuu malee, butamuun qulqullootaa malakata gidiraalee torbaa keessa gidiraalee ja'affaa keessa darbanii - yeroo Mormitoonni Kiristoos mul'atanii qulqulloota warra lammaffaa dhalatan ajjeesuu eegalan malakatni inni torbaffaan yeroo afuufamu ta'a. Yesuus samii irraa kan dhufu yeroo kana keessa, du'aa ka'uu fi butamuun qulqullootaa warra lammaffaa dhalatanii yeroo kana ta'a (1 Tasaloniiqqee 4:16-17).
Guyyaa kanatti, tokkoon tokkoon namaa karaa carraa ofii isaatii filate irra dhaabbata. Qajeelonni, "wangeela bishaaniifi Hafuuraa" tti amanan du'aa ka'anii butamanii Mootummaa bar Kumeefi jireenya Mootummaa Samiitti galu, haa ta'u iyyuu malee cubbamoonni du'aa ka'uu isa tokkoffaa keessaa hin hirmaanne dha'icha waciitii torba Waaqayyo biraa dhangala'uun erga adabamanii booda ibidda si'oolitti darbatamu.
Kanaafuu, hundee barsiisa sobaa amantii addaaddaa isa yaada biyya lafaa irratti hundaa'e keessaa baanee gara Dhugaa Dubbii Waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Kitaablee koo walitti fufee maxxansamaa jiran dubbisuudhaan akka isin eebba dhiifama cubbuufi dhufaatii Gooftaa isa lammaffaa fudhattaniif abdiifi kadhannaa koo isa guddaa dha.